ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်နေသဖြင့် တင်ပြခြင်း (သံလွင်မြစ်- ၂)
၆။ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများ၏ အမှန်တကယ်ကုန်ကျစရိတ်
ဤစာတမ်းကို စွမ်းအင်ရေးရာ မူဝါဒသုတေသနဂျာနယ်တွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်မှ ပညာရှင်များက အကြီးစားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ၂၄၅ ခုကို လေ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ဆည်ကြီးများကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာသည် ဧရာမရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း လုပ်ငန်းမျာအတွက် စဉ်းစားရာတွင် မှတ်တိုင် တစ်ခုဖြစ်သကဲ့သို့ ယခုစာတမ်းသည်လည်း အရေးကြီးသည့် မှတ်တိုင် တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။<!--more-->
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတို့အနေနှင့် ဧရာမစွမ်းအင်စီမံကိန်းကြီးများထက်စာလျှင် အချိ်န်တိုအတွင်းတည်ဆောက်ပြီးစီးနိုင်၍ ရွှေ့လွယ်ပြောင်းလွယ်ဖြစ်နိုင်သည့် အခြားသော စွမ်းအင်နည်းလမ်းများကိုသာ ပိုမိုလိုလားအပ်ကြောင်း စာတမ်း၏ အဓိကကောက်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ Policy makers in  developing countries, are advised to prefer agile energy alternatives that can be built over shorter time horizons to energy mega projects.
ယခုသုတေသန စာတမ်းတွင်တွေ့ရှိရသည်မှာ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု၊ ကြွေးမြီပေးဆပ်ရမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးကုန်ကျစရိတ် စသည်တို့ကို ဖယ်ထုတ်၍ ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ် တစ်ခုတည်းကို ကြည့်လျှင်ပင် ဧရာမဆည်ကြီးများ၏ ဘတ်ဂျက်ငွေ ခန့်မှန်းချက်သည် လျော့ပေါ့ တွက်ချက်မှုဆီသို့ ဦးတည်လေ့ရှိသည်။ အမှန်တကယ်ကုန်ကျစရိတ်က များစွာလွန်ကဲလေ့ရှိသည်ကို များစွာသော အထောင်အထားဖြင့် တွေ့ရှိရသည်။
ဖွံ႕ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတို့အနေနှင့် ဧရာမစွမ်းအင် စီမံကိန်းကြီးများထက်စာလျှင် အချိန်တိုအတွင်း တည်ဆောက်ပြီးစီးနိုင်ပြီး ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ဖြစ်နိုင်သည့် အခြားသောစွမ်းအင်နည်းလမ်းများကိုသာ ပိုမိုလိုလားအပ်သည်။
ဧရာမရေအားလျှပ်စစ် ဆည်ကြီးများဆိုင်ရာ အငြင်းအခုံ
၂၁ ရာစုကမ္ဘာတစ်ခွင်တွင် စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုကို သိသာစွာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုစိန်ခေါ်မှုအတွက်လတ်တလော တုံ့ပြန်ပုံမှာ ဧရာမ ရေအားလျှပ်စစ်ဆည်ကြီးများကဲ့သော အကြီးစားဖြေရှင်းမှုများဖြစ်သည်။ ထိုအကြီးစားဖြေရှင်းမှုများသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စွမ်းအင်ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မည့် အထိရောက်ဆုံး မဟာဗျူဟာ ဖြစ်ပါ၏လော။ အကြီးစားထုတ်လုပ်မှုမဟုတ်သည့်အတွက် လျှပ်စစ်ယူနစ်တစ်ခုချင်းအတွက် ထုတ်လုပ်မှုစရိ်တ်က ပိုမိုကုန်ကျစေကာမူ အရေအတွက်များပြားသော အသေးစားလုပ်ငန်းများသည်သာ ပိုမိုသင့်လျော်သော ဖြေရှင်းပုံမဟုတ်သလော။ အထူးသဖြင့် လတ်တလော တန်ဖိုးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးထိန်းချုပ်နိုင်မှု အမြင်မှ ကြည့်လျှင် အသေးစားလုပ်ငန်းများသည် ပိုမိုသင့်လျော်သည် မဟုတ်ပါလော။
ဆည်ကြီးများတည်ဆောက်မှုသည် ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုမျှ နှေးကွေးနေခဲ့ပြီးနောက် ရုပ်ကြွင်းလောင်စာ မသုံးစွဲရခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးနိုင်ခြင်း၊ စသည့် ဖွံ့ဖြိုး ကြွယ်ဝရေး မျှော်မှန်းချက်များဖြင့် မကြာသေးခင်ကာလများအတွင်း ပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ကြီးမားသော ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်၊ နက်ရှိုင်းသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာထိခိုက်နစ်နာမှုများကြောင့် အငြင်းပွားစရာများ များပြားနေခဲ့ရသည်။ တရုတ်ပြည်မှ မြစ်ကျဉ်းသုံးသွယ်စီမံကိန်းတွင် နောင် ဆယ်နှစ်အတွင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်နစ်နာမှု ကုစားရေးအတွက် သတ်မှတ်ရသည့် ဘတ်ဂျက်ငွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၆. ၄၅ ဘီလီယံဖြစ်သည်။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုဟု Sciene မဂ္ဂဇင်းက ဖော်ပြခဲ့သည်။ ငွေကြေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမားလှသော်လည်း ဧရာမဆည်ကြီးများ၏ မျှော်မှန်းထားသော အကျိုးစီးပွားမှာ သေချာလေ့မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ဆည်ကြီးများကဲ့သို့ မဟာစီမံကိန်းများသည် အစိုးရ၏ ရသုံးမှန်းခြေ ဘတ်ဂျက်ငွေစာရင်း အပေါ် နှစ်ပေါင်းများစွာ အကျိုးသက်ရောက်နေတတ်သည်။ အဆိုပါ သတိပေးချက်သည် အကြောင်းမဲ့ အထိတ်တလန့် ဖြစ်စေခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါ။ သုတေသန အထောက်အထားများစွာ ရှိပါသည်။ ဆည်ကြီးများသည် ကြွယ်ဝမှုလော၊ ကျိန်စာလော။ ဧရာမဆည်ကြီးများ ပိုမိုတည်ဆောက် သင့်ပါသလော။ ယခုစာတမ်းတွင် အဆိုပါ မေးခွန်းမျာကို ဆန်းစစ်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်မှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ထည့်မတွက်လျှင် ဧရာမဆည်ကြီးများ တည်ဆောက်ရသည့် ကုန်ကျစရိတ်သည် အကျိုးအမြတ်ပြန်ရရန် မလွယ်ကူသည့် အခြေအနေအထိ မြင့်မားသည်။ ရေစွမ်းအင်ကို စီမံခန့်ခွဲ အသုံးပြုသည့် လုပ်ငန်းမှာ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အရေးပါသည်ကို သံသယဖြစ်စရာ မရှိပါ။ သို့သော်  ဧရာမဆည်ကြီးများသည် လျော်ကန်သည့်နည်း မဟုတ်ပါ။
ယခု သုတေသနတွင် ဆည်တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရာ၌ 'အထောက်အထားအခြေပြု  ဆင်ခြင်စဉ်းစားမှုများ' ပါဝင်ခြင်း ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ကြည့်သည်။ ပထမတွေ့ရှိချက်မှာ စီးပွားရေးပညာရှင်များ၊ အင်ဂျင်နီယာများ၊ စာရင်းဇယားပညာရှင်များနှင့် အခြားလူပုဂ္ဂိုလ်များသည် စီမံကိန်း၏ အချိန်ကာလ၊ စရိတ်စကနှင့် အကုန်အကျများကို အလွန်အမင်း အကောင်းမြင်စွာ တွက်ချက်ကြသည်။ မိမိကျွမ်းကျင်ရာ နယ်ပယ်ရှုထောင့်မှ နေ၍သာ ကြည့်ရှုသည့် အလေ့ကြောင့် ဖြစ်ရသည်။ ပြင်ပသို့ထွက်၍ အခြားသော ဥပမာများနှင့် နှိုင်းယှဉ် တွက်ချက်မှု ပြုခြင်းမရှိပါ။ ဤသည်ကို 'စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အယူမှား' ဟု ရည်ညွှန်းသည်။
ဒုတိယ တွေ့ရှိချက်မှာ စီမံကိန်းဖြစ်မြောက်ရန် ဆွဲဆောင်စည်းရုံးသူတို့က အချက်အလက်များကို လွဲမှားတင်ပြကြခြင်းဖြစ်သည်။ အကျိုးစီးပွားမက်လုံးများက ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချွတ်ချော်ခဲ့စေကြောင်း အားကောင်းသည့်အထောက်အထားများစွာကို အခြေခံ အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်မှုဆိုင်ရာ သုတေသနများတွင် တွေ့ရှိရသည်။
ယခု သုတေသန၌ ' စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အယူမှား' ဟူသော အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိက ဝေဖန်ဆန်းစစ်ကြသည်မှာ စီမံကိန်း မန်နေဂျာများ၏ တင်ကြိုခန့်မှန်းချက်နှင့် အမှန်တကယ် ရလဒ်ကြား ကွဲလွဲနေသည့် အခြေအနေပင်ဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုကုန်ကျနိုင်သည် ဟူသော အခြေအနေ ရှိနေလျှင် ဆည်ကြီးများသည် စီးပွားရေးအရ တွက်ခြေကိုက်မည် ဟူသော အကြောင်းပြချက်မှာ ပျက်ပြယ်သွားပြီ ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်းများ၏ ငွေကြေးစရိတ်စကနှင့် ပြီးစီးရမည့် အချိန်ဇယား ချွတ်ချော် လွဲမှားနေပြီဆိုလျှင် ထိုစီမံကိန်းများ၏ လူမှုရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများမှာလည်း နိမ့်ကျ ဆိုးရွားရန်သာများသည်။ ထို့ကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အချိန်ကာလ လွဲချော်မှုများသည် စီမံကိန်း မအောင်မြင်နိုင်သည့် အလားအလာကို ဖော်ပြသည့် သိသာထင်ရှားသော ညွှန်းကိန်း များဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းအရ ဆည်နံရံအမြင့်  ၁၅ မီတာထက် ကြီးသောဆည်များကို ဧရာမ ဆည်ကြီးများဟု ရည်ညွှန်း၍ ယခုသုတေသနတွင် ၁၉၃၄ မှ ၂၀ဝ၇ အတွင်း တည်ဆောက်ခဲ့သည့် တိုက်ကြီး ငါးတိုက်၊ နိုင်ငံ ၆၅ နိုင်ငံ မှ ကိုယ်စားပြု နမူနာ ဆည်ကြီး ၂၄၅ ခုကို ဆန်းစစ် လေ့လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်၊ အမှန်ကယ် ကုန်ကျစရိတ် စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်သော စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများက အခြေပြုလေ့လာခဲ့သည်။
ယခု သုတေသနတွင် ငွေကြေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကိုသာ တွက်ချက်၍ အကြွေးပြန်လည် ပေးဆပ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များ၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုကို ကုစားရသည့် နောက်ဆက်တွဲ ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ရေနစ်မြှုပ်ဆုံးရှုံးသွားရသည့် မြေယာတို့မှ နှစ်စဉ် ထုတ်ကုန်ကြောင့် ရရှိနိုင်သည့် အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းတန်ဖိုးများ မပါဝင်ပါ။
ခန့်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုကုန်ကျစရိတ် နှင့် ပတ်သက်၍ ယခုသုတေသနတွင် အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိရသည်။
- အကြီးစားဆည် လေးခုတွင် သုံးခုမှာ စရိတ်စက ကျော်လွန်ကုန်ကျသည့် ဒဏ်ခံရမြဲဖြစ်သည်။
- ခန့်မှန်းထားသည့် စရိတ်စကထက် အမှန်တကယ် ကုန်ကျစရိတ်မှာ  ၉၆% ခန့် များပြားလေ့ရှိသည်။
- စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲသူများသည် ဝေးကွာသည့် အနာဂတ် ဖြစ်လာနိုင်ခြေများကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရာတွင် အခက်အခဲ
– မည်သည့်ကမ္ဘာ့နေရာတွင် တည်ဆောက်သည့် ဆည်မဆို စရိတ် ကျော်လွန်ကုန်ကျသည့် ပြဿနာ ကြုံတွေ့ရမြဲဖြစ်သည်။
– ဆည်ကြီးများ၏ အမှန်တကယ် အကျိုးရလဒ်သည် လျာထားချက်ကို အမှန်တကယ် ပြည့်မီလေ့မရှိသည့် အထောက်အထားများစွာရှိသည်။ ကြိုတင် ခန့်မှန်းထားသည့် လျာထားချက်အတိုင်း ဖြစ်လာသည် ဆိုလျှင် ပင် စရိတ်ကျော်လွန် ကုန်ကျမှုကြောင့် စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ် ထိခိုက်ရမြဲ ဖြစ်သည်။
– စရိတ်စက ကျော်လွန်ကုန်ကျမှု ပြဿနာသည် မည်သည့် ဆည်တည်ဆောက်မှု ပုံစံ အမျိုးအစားတွင်မဆို ကြုံတွေ့ ရလေ့ရှိသည်။
– မည်သည့် ဆယ်စုနှစ်၊ မည်သည့် ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်သည် ဟူသည့် အချက်နှင့် စရိတ်ကျော်လွန်ကုန်ကျမှု ပြဿနာဆက်စပ်နေခြင်း မရှိ။ မည်သည့် ကာလအပိုင်းအခြားတွင်မဆို ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။
ဤသုတေသနအရ ဆည်စီမံကိန်းကြီးများတွင် အတိတ်မှ သင်ခန်းစာ ယူမှု အလွန်နည်းပါးသည်ကို တွေ့ရသည်။ ယနေ့ကာလ စရိတ်စက ခန့်မှန်းချက်များသည်လည်း ၁၉၃၄ နှင့် ၂၀ဝ၇ ကာလများကဲ့သို့ပင် မှားယွင်းနိုင်မြဲ ဖြစ်သည်။
ခန့်မှန်းစရိတ်စကထက် ကျော်လွန်ကုန်ကျမှု ကဲ့သို့ပင် သတ်မှတ်အချိန်ကာလထက် ပိုမို ကြာမြင့်မှုပြဿနာကို ယခုသုတေသနတွင် တွေ့ရှိရသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် သတ်မှတ်အချိန်ကာလထက် ၈.၆ နှစ်မျှ ပိုကြာတတ်သည်ကိုုတွေ့ရသည်။ ဆည်ကြီး ဆယ်ခုတွင် ရှစ်ခုမှာ သတ်မှတ်အချိန်ကာလထက် တည်ဆောက်ချိ်န် ပိုကြာသည်။ စရိတ်ကျော်လွန် ကုန်ကျမှုကဲ့သို့ပင် ပြီးစီးနိုင်မည့် အချိန်ကာလကိုလည်း အစီအစဉ် တကျ လျှော့တွက်လေ့ရှိကြောင်း အထောက်အထားများစွာ တွေ့ရသည်။
ယခင်ဆောင်းပါးလွှတ်တော်တွင် အစိုးရအဖွဲ့ ဖြေနိုင်သော မေးခွန်းများကိုသာ မေးမြန်းရန် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ ကြိုတင် ညှိနှိုင်း
နောက်ထပ်ဆောင်းပါးမော်လမြိုင်ကျွဲကောသီးဈေး ယခင်နှစ်ထက် နှစ်ဆနီးပါး မြင့်တက်